fialam-boly sy fialamboly | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: fialam-boly sy fialamboly
Karatra Paska vita amin'ny taratasy miloko
Ny asa-tanantsika ankehitriny dia momba ny Paska. Ho karatra paositra vita amin'ny taratasy miloko izy ary aseho amin'ity sokajy master ity.
Ny asa-tanan'ny paska amin'ny atody taratasy
Ity asa tanana paska nataon'ny ankizy ity dia fanampiny tsara amin'ny fahatsiarovana fety. Miomana ny hankalaza ity fialantsasatra mamirapiratra ity ny olon-dehibe amin'ny fividianana sakafo any amin'ny magazay, fanasana vahiny, fa ny ankizy koa manonofinofy handray anjara amin'ny fanomanana.
Ahoana ny fomba manjaitra ny akanjo amin'ny clown amin'ny tananao
Tsy maintsy mahafinaritra ny fialantsasatry ny taom-baovao ho an'ny ankizy. Ary noho izany dia mila akanjo karnavaly ianao. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia tiako ny miresaka momba ny fomba ahafahanao manjaitra akanjo akanjo amin'ny tananao manokana. Fitsipika tsotra ao ...
Dragon's Gardner: illusion optika DIY
Ny illusions optique dia tsy mamela ny tsy firaharahiam-bolo na olon-dehibe na ankizy, milentika ao anaty karazana majia izy ireo ary miaraka amin'izay dia mampangotraka ny ati-doha amin'ny tsy fahitana fahitana. Indraindray ny tetika dia tsy dia sarotra takarina. ...
Fitondrana voatavo DIY: kilasy master, dingana manaraka. Loharano fararano avy amin'ny legioma
Ny hevitra hampiasa voatavo ho fitaovana fanaovana asa-tanana aloha dia tonga tao an-tsain'ny angano avy amin'ny angano nataon'i Charles Perot. Fa raha dinihina tokoa, ny karazany an'ala amin'ity voaroy ity amin'ny endrika maina dia nanompo ...
Ahoana ny fomba hanaovana piramida na fahagagana fahafito eto amin'izao tontolo izao ao an-trano?
Hatramin'ny andro taloha, ny iray amin'ireo "perla" amin'ireo zava-mahatalanjona fito eto an-tany dia heverina ho Piramida Lehibe any Giza, Egypt. Nanangana millennie maherin'ny 4 sy sasany lasa izay ho an'ny iray amin'ireo farao malaza indrindra - Khufu, na ...
Puncher fitsangatsanganana: ahoana ny fomba hisafidianana sy ampiasaina
Ankehitriny maro ny olona no misafidy ho fialamboly amin'izay hetsika mifandraika amin'ny fanaovana fahatsiarovana amin'ny tanany manokana. Raha manapa-kevitra ny hamolavola rakikira, sary, carte postales na vokatra hafa mampiasa taratasy haingon-trano na baoritra ianao, ...
Ahoana ny fomba fanaovana fitafiana Papuan amin'ny tananao?
Ny fety ataon'ny ankizy sy ny antoko misy lohahevitra ho an'ny olon-dehibe indraindray dia mahatonga anao hieritreritra tsara ny safidin'ny sary. Ny fividianana akanjo efa vita amin'ny fivarotana manokana dia tsy fahafinaretana mora vidy isaky ny mandeha. Raha ny tena izy ...
Sarotra fehitoha - accessory lamaody amin'ny ririnina mangatsiaka
Ny fehin-kibo mafana sy azo ampiharina, vita amin'ny kofehy volon'ondry, dia ho lasa fitaovana ilaina amin'ny vanin-taona mangatsiaka. Mazava ho azy, ity no eo anoloana lobaka. Ny kojakoja namboarina na voaravaka volom-borona dia ho tsipiriany mahomby ho an'ny endrika rehetra. Momba ny ...
"Manidina aho": andraikitra sy mpilalao sarimihetsika. "Manidina aho": ny tetika amin'ilay sarimihetsika
Ny fiainan'ny mpianatra mpitsabo dia tsy misy tsy itovizany amin'ny fiainan'ny mpianatra hafa: fanadinana, fotoam-pianarana ary fitsaharana amin'ny fotoana malalaka ananany. Saingy, manomboka amin'ny taona fahefatra dia tsy maintsy ...
Fatma Sultan sy ny mpilalao artista tiorka izay nilalao azy, Meltem Jumbul
Taona maro lasa izay, nipoitra ny andiana fahitalavitra Tiorka "The Magnificent Century" ("Muhteşem Yüzyıl"). Notantaraina tao ny momba ny vanim-potoana nitondran'ny Empira Ottoman, ny vahoaka Tiorka mihaja indrindra, Sultan Suleiman. Nandritra ny fizaran-taona dia nahitan'ny mpijery ...
Ny lalao "Pushkin's Tales", Theatre of Nations: hevitra. Robert Wilson talen'ny, mpilalao
Tamin'ny 6 Jona 2015, hetsika iray no niseho tao amin'ny tontolon'ny tantara an-tsehatra izay tsy namela ireo mpijery na mpitsikera tsy miraharaha. Ity no premiere amin'ilay tantara an-tsehatra "Pushkin's Tales" (Theatre of Nations), ny hevitra izay ahitanao ny fifanoherana indrindra. ...
Zanakavavy Orbakaite - Claudia
Ny zazavavintsika ankehitriny dia ny zanakavavin'i Orbakaite. Efatra taona lasa izay, nomen'ilay mpihira zazavavy ny vadiny Mikhail Zemtsov. Claudia no anaran'ilay zaza. Mikhail dia nanolo-tena hanome ilay zaza ny anaran'ny vadiny - ...
Tamara Makarova - vehivavy voalohany amin'ny sarimihetsika sovietika
Ny anjara asany dia nanentana ny faniriana hanahaka vehivavy sovietika an-tapitrisany. Ireo sary natsangany teo amin'ny efijery dia nahatonga ny fon'ny lehilahy maro hitempo haingana kokoa, saingy Sergey Gerasimov iray ihany no nomena ny fitiavany. Izy dia…
Ny horonantsary "One Flew Over the Cuckoo's Nest": hevitra. Flew Over the Cuckoo's Nest: mpilalao sy andraikitra
One Flew Over the Cuckoo's Nest dia iray amin'ny sanganasa tsara indrindra amin'ny tantara amerikana ankehitriny. Ny fampifanarahana ny bokin'i Ken Kesey dia nanjary kilalao sarimihetsika. Ahoana no fahitan'ny fiarahamonina amerikana ilay sarimihetsika momba ny fiafaran'ilay mpikomy, ary ...
Mianara manao sary Frozen. Ny mpandray anjara amin'ny sariitatra
Elsa, ilay maherifo amin'ny sariitatra "Frozen", dia nanao ozona ho an'ny fanjakana iray manontolo. Ary ankehitriny permafrost tonga ho an'ny olona. Noho izany dia nanomboka nantsoina hoe Queen Snow i Elsa. Ny rahavaviny Anna dia miezaka mamonjy azy ...
Boky data mena ao amin'ny faritra Sverdlovsk: biby sy zavamaniry
Ny Red Data Book an'ny Faritra Sverdlovsk dia antontan-taratasy manokana izay anoratana ny biby sy zava-maniry tsy fahita firy sy tandindonin'ilay faritra. Mahaliana fa nisy lisitra nitovy tamin'izany teo aloha, saingy nahatafiditra ny mponina ao amin'ny Afovoany manontolo ...
Sangan'i A. Platonov, famintinana. "Makar ahiahy"
Ny tantaran'i A. Platonov - atolotray ny atiny fohy - "Douboub Makar" dia nosoratana tamin'ny taona 1929. Izy io, raha ny marina, dia mamaritra ny fizotry ny fahaterahan'ny birao amin'ny fanjakana tanora. Ary olon-tsotra ...
Theater "Millennium": repertoire, troupe, hevitra
Ny Theatre Millennium dia nosokafana 10 taona mahery lasa izay. Ny tariny dia mampiasa mpilalao sarimihetsika malaza sy fantatry ny mpijery betsaka amin'ny fahitalavitra sy sary mihetsika. Ny repertoire an'ny teatra dia misy fampisehoana karazana karazany - hatsikana, ...
"Maleficent". Ireo mpilalao sarimihetsika angano momba ny fandeferana
Ny tantara an-tsarimihetsika Disney Maleficent miaraka amin'i Angelina Jolie tsara tarehy amin'ny endrika angano manana elatra sy manana tandroka dia nanaitra ny mpijery tsy dia nisy fiatraikany manokana toy ny hafatra moral sy ideolojia ankapobeny. Miorina amin'ny angano malaza manerantany ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 1 Next Page
61 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 2,386.